Sababtii Perez uu bayaanka Real Madrid ugu weeraray Lopetegui oo la ogaaday! – Gool FM
Sababtii Perez uu bayaanka Real Madrid ugu weeraray Lopetegui oo la ogaaday!
Liibaan Fantastic October 31, 2018
(Madrid) 31Okt 2018 Real Madrid ayaa si rasmi ah isaga cayrisay tababare Lopetegui kaas oo 4-bil uun ahaa tababaraha kooxda.
Bayaankii Real Madrid ay ku cayrisay Lopetegui ayaa u muuqday mid lagu liidayo tababaraha reer Spain kaas oo u qornaa sidaan:
“Waxaa jira farqi wayn oo u dhexeeyay tayada xiddigaha kooxda oo 8-kamid ah loo doortay ciyaartoyda u tartamayay abaal marinta xiddiga adduunka taas oo ah wax aan horay u soo marin kooxda iyo waliba natiijooyinkii ay kooxdu la gaartay Lopetegui”.
Mundo Deportivo ayaa daaha ka qaaday in bayaan kaan lagu sheegay in cilada haysatay kooxda ay ahayd khibrad yarida tababare Lopetegui.
Weerar kaan ayaana yimid kadib markii Lopetegui uu ku adkaystay in la siiyo lacagta uu xaqa u leeyahay oo ah 18 milyan oo euro taas oo maamulku ay u arkaan inuusan u qalmin maadaama uu burburiyay sumcada kooxda.
Antonio Conte oo iska fogeeyay shaqada kooxda Real Madrid
Man United oo Waji gabax kala kulantay Man City kahor kulankooda!!!...(Maxaa dhacay?)